Xogaha qarsoon ee kujira calamadaha dunida ugu caansan - Land Of Punt
Meelo badan baad ku arkay astaan (logo) ka turjumay shirkado yaryar iyo qaar siweyn looga yaqaan dunida. Calaamdaha sida weyn loo xiiseeyo waxaa kamid ah Nike, Adidas, Mocdonalds, Coca Cola oo ka turjumaya shirkado gaar loo leeyahay iyo adeegyada ay bixiyaan. Astaamahan waxaad ku arkay oo lagusoo bandhigaa shirkadaha wajahadooda oo aad ku arkay. Waxaad kaloo ku arkay calaamadahan goobaha xaysiiska sida TVga, jaraa’idka, social media iyo boodhadhka fagaarashaya bushadu isugu timaado.
Wakhtigan casriga ah ee dunida noqotay meel laysu warhayo oo cilmi iyo xogba si fudud loo helo karo ayaa inoo saamax in wax badan oo aan hore loohayn fahamkooda iyo meesha ay kasoo jeedan inla ogaado bulshaduna ukuur gasho. Waxaa isasoo taray in bulshadu ku baraarugto oo ay fahmaan cilmiga iyo siraha ku duugan astaamaha shirkaduu isticmaalan.
Waxaynu isdultaagaynaa bal inaynu ka faa’idaysano karno oo fahamno calaamadahan lagusoo dhextuuray dunida siiba bulshda afsoomaliga ku hadasha meesha ay kasoo jeedan asalkoodu. Cilmiga calaamadaha iyo nuxurka ay xambaarsanyihin“cognitive sciences, neuropsychology and biology” waxaa lagu dhigaa Jaamacada “Chicago of University” waana meesha aad raad raaca helista cilmiga calaamada iyo nuxurka ay xambaarsanyihiin laga helo. Cilmiga calaamadaha iyo inlahelo saynis lahalmaala nuxurka kujira astaamaha, waxaa asaaskooda lahaa oo dhiirigeliyey hayada layidhaah “Rockefeller Foundation”. Cilmiga kujira calaamadaha iyo inlaga faa’idaysiga oo bulsho meel isugutimid ku wadahadlaan ama isku soo suureeyan ilaa iyo bilowgii tarikhda way jireen bulsho intaan lahelin qalinka iyo buuga. Calaamdaha waxaa lagu dhex arkijiray oo isticmaalijiray diimaha iyo wadaadka dadka isukeenaya.
Hayada “Rockefeller Foundation” waxaa asaasay John D. Rockerfeller oo ah nin yahuudi ah laguna tiriyo raga dunida ugu lacagta badan. Hayada “Rockerfeller Foundation” waxay can ku tahay inay maal geliso mashaaricada dunida ugu waa weyn iyo dawladaha siiba siyaasiyiinta ay isku hadafka yihiin amase ay keensadeen iyagu si’ay ugu fushadaan danahooda gaarka ah.
Dhinaca, maalgelinta calaamadahan laba ujeedo baa bundhig u ah oo laga leeyahay. Marka ugu horeysa waa in suuqgaynta wax lagu yeesho oo shirkadaha dunida ka hawlgala la mulkiyo ama lagu darsado astaan ka turjumay iyaga (e.x. Rockerfeller) oo meesha wax lagukala iibsanayo ka maqnaan. Calaamadaha lagasoo shaqeeyey (sixir) ee lagusoo alifay jaamacada Chigaco waxaa lasoo raacsiyey wax alaale wixii gacan lagu sameeyo ee bulsho meel isugutimid isticmaalayaan hadii ay tahay gawaadhi, dhar iyo cadarba iwm. Arinka labaad, waa in bulshada lagu yeesho saameyn hadii la isticmaalayo alaad shirkad soo samaysay sitoos ah ama si dadan ayey saamayntu kusoo gaadhay, dhaqaale iyo siyaasadba.
Cilmi baadhayaasha maanka waxay tilmaamen in hadii ladoonayo in bulshada labaro shay/aalad si’ay u isticmaalan qaybna uga noqoto nololshooda caadiga ah waa in ugu yaraan sadex jeer la’tusaa oo maskaxdooda lagusoo celceliyaa tiraba sadex jeer. Fariinta ladoonayo inlasoo gudbiyo waa inay bulshada wadagaadha mid wax akhriya iyo midaan waxba akhriyin; nimankan barnaamijka calaamadaha ka dhex hadlaya iyo bulshada la abaaray waa inay isfahmaan oo xataa hadii ay ku kalifay qaab cilmi dhagoolayn oo astaamo iyo wax lamid ah lagula wadahadlo waa in la hirgaliya.
Markaynu sidaa leenahay waxaynu ujeedna oo qeexid ubaahan qaabka communicationku udhacayo inaynu isla fahamno. Waxaa la’ogaaday in maanka iyo ruuxda oo ah qaybta ugu muhiimsan biniadamka sida ugu haboon ee lagula hadlikaro loona macaamilikaro siiba ruuxda ay tahay inla adeegsado sawir iyo calaamado. Arinkaa waxaa laga hayaa oo daraasad ku sameeyey Sigmund Freud oo ah ninka loo aqoonsanyahay inuu yahay asaasihii cilmiga maanka inkastoo uu ahaa nin badalwad badan isticmalijirey daraagda kokaiinta oo saamaynweyn kuleh maanka waa ninka loo dabafadhiisto mawduuca saakoolojiyada. Turjumida calaamdaha iyo nuxurka ay utaagan yihiin waa laga qariyaa bulshada waxayna doododu noqonay hadiiba laga maarmay fahamkii caadiga ahaa iyo wadahadal in xogta laysugu gudbiyo waxay amineen in hadiiba loo dhaadhacay ruuxda oo xogta la rabo inay gudubto maanka hoose fahmay ujeedada fariinta inaan inaan waxkale loo baahnayn inyar oo kooban ayuun baa lala wadaagaya nuxurka iyo sirta calaamdaha kujirta. Guud ahaan bulshada waa laga qariyey siraha ku geedaman ee ku dhexjira astaamaha. Dad faro kutirisa ayaa haya cilmigan fahamkiisa.
astaan symbolism turjumida calaamadaha ururada hadafka qarsoon leh